दैनिक खाइने आलुले स्वास्थमा यती धेरै नोक्सान गर्छ !! | सुदुरपश्चिम खबर
दैनिक खाइने आलुले स्वास्थमा यती धेरै नोक्सान गर्छ !!
आलुलाई तरकारीको राजा मानिन्छ ।किनभने आलु प्रायः सबै तरकारीमा मिसाएर पकाउन मिल्छ ।आलु बिनको तरकारी अपुरो जस्तो लाग्छ ।तर के तपाईंलाई थाहा छ, आलु खाँदा स्वास्थमा धेरै नोक्सान पनि पुग्छ भन्ने कुरा आलु खाँदा हुने प्रमाख नोक्सानहरु यस प्रकार छन् ः
ब्लड प्रेशरःआलुको सेवनले हाई ब्लड प्रेशरको खतरा बढ्छ । सर्वेक्षणका अनुसार हप्तामा चार अथवा त्योभन्दा धेरै पटक आलु खानाले हाई ब्लड प्रेशरको खतरा बढ्छ । त्यसैले हाई ब्लड प्रेसरको समस्याबाट बच्नका लागि आलुको सेवन गर्नु हुँदैन । गर्नु नै परेमा कम मात्रामा गर्नु पर्छ ।
मधुमेहःयदि तपाईं मधुमेह अर्थात डाइबिटीजको बिरामी हुनुहुन्छ भने आलुको सेवन गर्नु हुँदैन । आलु तपाईंका लागि अति नै नोक्सानदायक हुन्छ । वास्तवमा शुगरलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आलु सेवनमा नियन्त्रण गर्नु पर्छ । आलुमा ग्लाइसेमिक इन्डेक्स हुन्छ, जसले शरीरमा ग्लूकोजको मात्रामा वृद्धि गर्छ ।
वजनःआलुको सेवनले तपाईंको वजन पनि बढ्छ । यदि वजन कम गर्न चाहनु हुन्छ भने आलु खान कम गर्नु पर्छ ।एसिडिटीःआलुले ग्याँसको समस्या पनि उत्पन्न गराउँछ । आलुले प्रायस् मानिसलाई ग्यास्ट्रिक हुन्छ । यदि तपाईंलाई पनि यस्तै समस्या छ भने आलुको सेवन कम गर्नु पर्छ ।
वजनःआलुको सेवनले तपाईंको वजन पनि बढ्छ । यदि वजन कम गर्न चाहनु हुन्छ भने आलु खान कम गर्नु पर्छ ।एसिडिटीःआलुले ग्याँसको समस्या पनि उत्पन्न गराउँछ । आलुले प्रायस् मानिसलाई ग्यास्ट्रिक हुन्छ । यदि तपाईंलाई पनि यस्तै समस्या छ भने आलुको सेवन कम गर्नु पर्छ । (gnewsnepal बाट सभार)
सुत्नु अघि यस्ता खानेकुरा खाँदा स्वास्थ्यमा पर्ने गर्छ गम्भीर असर !!
काचो प्याज खानुका यस्ता छन फाइदाहरू !!
गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका बैतडीका युवकको मृत्यु !!
कञ्चनपुरमा शक्तिशाली ठूला तस्करलाई छुट, क्यारिङ्गकर्ता विपन्न गरिबलाई मार्का !!